शीर्ष नेताहरुले प्रचण्डलाई भने, ‘गो अहेड’ | Ratopati
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeसाउन १२, २०७७ chat_bubble_outline1
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको आन्तरिक विवाद झन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक मंगलबार (भोलि)का लागि तय भएको छ । उक्त बैठकबारे अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच छलफल भएको छैन । दुई अध्यक्षबीच छलफल भएपछि मात्र स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने सहमति भएको छ । तर अहिलेसम्म अध्यक्षद्वयबीच संवाद हुन सकेको छैन ।
यसअघिका बैठकहरु अध्यक्षद्वय बीचको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि स्थगित हुँदै आएको थियो । तर भोलिको बैठक स्थगित नहुने निष्कर्षमा प्रचण्ड–नेपाल समूह पुगेको छ । सोबारेमा प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको छलफलमा भोलिको बैठक स्थगित नगर्ने निष्कर्ष निस्किएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक बसाउन इच्छा देखाएका छैनन् । अध्यक्ष प्रचण्डले शीर्ष नेताहरुलाई आफ्नो निवासमा भने, मैले प्रधानमन्त्री ज्युसँग पटक पटक छलफल गरेको छु । तर उहाँ स्थायी कमिटीको बैठकप्रति कुनै चासो देखाउनु भएको छैन । यो तरिकाले पार्टी कसरी अगाडी बढ्छ ? पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी कहिलेसम्म बनाई राख्ने ?’
त्यसपछि शीर्ष नेताहरुले अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्ने र बैठक सञ्चालनका लागि नमाने अगाडि बढ्ने सुझाव दिएको खुमलटार स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले यो विवादमा तटस्थ देखिएका स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापालाई बोलाएर पनि विहान छलफल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा थापा देखिएको छैन । अध्यक्ष प्रचण्डले उनलाई बोलाएर त्यस विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा गर्दै आएको बदमासीमा बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
ओलीकै कारण पार्टी कसरी समस्यामा परेको छ भनि कुरा बादललाई सुनाएको स्रोतले जनाएका छन् । त्यसपछि बादलले प्रचण्डलाई अगाडि बढ्न संकेत गरेको बताइन्छ ।
विहान बादलसँग छलफल गरिसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले झालनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग पनि छलफल गरेका थिए । भोलि बस्ने स्थायी कमिटीको बैठक सञ्चलनका विषयमा उनीहरुबीच छलफल भएको थियो । उनीहरुले पनि अब पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्षा गरेर नहुने भन्दै पार्टीमा कदम चाल्ने अवस्था आइसकेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माने पनि नमाने पनि स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने र सोही बैठकमा पार्टीमा देखिएका सम्पूर्ण विवादको समाधान गर्ने सोचमा उनीहरु पुगेको स्रोतको भनाइ छ । पटक पटक बैठक स्थगित हुँदा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै तोकिएको समयमा बैठक बस्ने र बहुमतले निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको खुमलटार बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
यस्तै माधव र झलनाथ खनालसँग छलफल चलिरहेकै बेला स्थायी कमिटीका सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्का स्थायी कमिटी सदस्य तथा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि खुमलटार छिरेका थिए । मन्त्री ज्ञवालीलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति नभए कति दिनसम्म पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई राख्ने भन्दै बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दै अगाडि बढ्नेको विकल्प नरहेको कुरा राखेका थिए ।
स्रोतका अनुसार त्यसको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले सर्वसम्मति नभए बहुमतको आधारमा अगाडि बढ्नुभन्दा अध्यक्षद्धयबीच एउटा समझदारी बनेपछि मात्र अगाडि बढ्दा उचित हुने धारणा राखेका थिए ।
अध्यक्षद्वयको पहल र सहमतिमा पार्टी एकीकरण भएको र अब यसलाई कसरी जोगाउने त्यसमा गम्भीर हुन उनले आग्रह गरेको थिए । दुईजना अध्यक्षको बीचमा संवाद हुन जरुरी रहेको भन्दै उनले प्रचण्डलाई सुनाएका थिए ।
त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग छलफल गर्नका लागि उनको निवास पुगेका थिए । उपाध्यक्ष गौतमसँग पनि भोलि बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकबारे छलफल गरेका थिए । गौतमले पनि अब पार्टीलाई धेरै दिनसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै अगाडि बढ्न सुझाव दिएको प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए ।
त्यसअघि प्रचण्डले आफ्ना पक्षका स्थायी कमिटीका केही सदस्यहरुसँग पनि आफ्नो निवासमा छलफल गरेका थिए । शीर्ष नेताहरुले प्रचण्डलाई‘ गो अहेड’को नीति लिन सुझाएका थिए ।
July 28, 2020, 1:32 p.m. Ganesh prasad Dahal
पैसा नतिरी नाटक र रत्यौली हेर्न पाइएको छ । एउटा बोट नमासि अर्को बोट सप्रिँदैन भन्थे । कम्युनिष्टको बोट कम्युनिष्टले नै मासेर काङ्ग्रेसको बोट सप्रिने गरि कम्युनिष्टले गुन लगाउने भएछन् । आगामी दिनमा काङ्ग्रेस पहिलो, बाबुरामवाला जसपा दोस्रो, अलिअलि मेहनत गरे राप्रपा तेस्रो, नौटङ्की देखाउने कम्युनिष्टवाला चौथो र पाचौँ भएको हेर्न पाइन्छ जस्तो छ । यी दुई तिहाई नजिकका कम्युनिष्ट आफैँ आफैँ टोकाटोक गरेर मासिएर अरूलाई उँभो लगाउने भए । आहा !!! कति मज्जा, आफ्नै कारणले आफ्नो जागिर, सत्ता, शक्ति, वैभव, दम्भ, मान, सान गुमाउने भए । यिनीहरू धुरुघुरु रुँदै हिँड्ने दिन आउने छन् । रुँदै हामी जनतासँग आएभने नाक भाँचिने गरि लोपारि दिनेछौँ ।
माटोको टीका लगाएर सोमबार कमलपोखरी–बालुवाटार मार्चपास हुँदै
गजेन्द्रनारायण सिंहको १९ औं स्मृति दिवस : मुद्दा जीवित तर राजनीतिक पहिचान समाप्त